मन्त्रीमाथि खनिए नेकपा सांसद, 'जनताका प्रतिनिधिलाई हेप्ने ?' - Dainik Online Dainik Online
मन्त्रीमाथि खनिए नेकपा सांसद, ‘जनताका प्रतिनिधिलाई हेप्ने ?’
प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०७६, बिहिबार ११ : ३८
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले संसदप्रति उत्तरदायी बन्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको क्षेत्रमा थप कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राष्ट्रियसभाको विहिबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले संसदमा उठेका सवालमा इमान्दार भएर जवाफ दिन सरकार र सरकारका मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। त्यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न पनि आग्रह गरे।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको थलो संसदप्रति उत्तरदायी बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
संसदको विभिन्न समयमा के कस्ता विषयमा कुरा उठेको छ भन्ने सम्म मन्त्रीहरुलाई जानकारी नहुने गरको भन्दै उहाँले संसदप्रति इमान्दार, जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न आग्रह गर्नुभयो। सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुले सांसदले उठाएका सार्वजनिक सरोकारका विषयप्रति जवाफदेही नभएकोमा आक्रोश पोख्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “जवाफ नदिने । बोले पनि हुने , नबोलेपनि हुने। ठिक बोलेपनि हुने बेठिक बोले पनि हुने । मनलागे बोले नि हुने । मन नलाए नबोले नि हुने । यस्तो प्रकारको सदन भएपछि सदनको गरिमा घट्छ अध्यक्ष महोदय। सदनको गरिमा घट्यो भने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ । जनताका प्रतिनिधिलाई हेप्ने प्रकारले कुरा गरेपछि प्रश्न उठ्छ । महोदय । त्यसैले उद्घाटन व्यापक रुपमा मन्त्रीले भ्याउने । हरे शिव । उद्घाटन गर्न जहाँ नि भ्याउने तर संसदमा जवाफ दिन नभ्याउने ? संसदमा के बोलियो त्यसमा ध्यान दिन पर्यो । ”
संसदमा सांसदहरुले उठाएका सबै विषयको रेकर्ड राख्दै ती सवालको जवाफ दिएर जनताप्रति आफ्नो इमान प्रदर्शन गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उद्घाटन गर्न जहाँ पनि पुग्ने गरेका मन्त्रीहरु सदनमा भने कमै उपस्थिति जनाउने गरेको तर्फ पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुयो।
उहाँले भन्नुभयो “के बोल्ने ? देखेको कुरा बोल्ने । हेर्नु भनेको र देख्नु भनेको फरक फरक विषय हो । प्राय सबैले हेर्छन् । देख्न चाही साह्ै थोरैले देख्छन् । बह्मज्ञानीहरुले देख्छन् । इमान पुर्वक हेर्नेले देख्छन् । सर्वसाधरण जनताले इमानका साथ ध्यान पुर्वक हेरे भने देख्छन् । त्यसैले ७४ साल पछिको आमनिर्वाचन पछिको सरकारले गरेको काम प्राय सबैले हेरे तर सर्वसाधरण, दुरदृष्टि राख्ने ज्ञानीहरुले मात्रै देखे । जे देखिन्छ, त्यही बोल्नु । देख्ने र बोल्ने फरक फरक कुरा जसले गर्छ बेइमान त्यही हो । देख्ने एकथोक बोल्ने अर्कोथोक । इमानपुर्वक देख्ने र इमानपुर्वक बोल्ने हरेक नागरिकको र प्रतिनिधिको कर्तव्य हो । त्यसैले अहिले कुरा उठ्या छ यो व्यवस्थाका विरुद्धमा कुन्नी कोको कोको आए अरे । यसप्रकारका कुरा उठ्या छ । संसदको गरिमा भएन भने व्यवस्थाको गरिमा हुदैन । संसदमा सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि आएर टन्न बस्नुपर्यो नि अध्यक्ष महोदय । यहाँ कुन विषयमा सांसदले बोल्छन् मन्त्रीलाई थाहा छ ? छैन ।”
सदन प्रभावकारी बनेर आधुनिक, प्रगतिशील र जनमुखी कानुन बनाएर अघि बढेमा व्यवस्था विरोधीहरु त्यसै ‘झिसमिस’ हुने तर्क गर्नुभयो।